Nhau - Ndeupi Musiyano? Muchena uye Muchena Peaches
Peach inodakadza, ine muto ndeimwe yemafaro ekupedzisira ezhizha, asi chii chiri nani: chena kana yero? Pfungwa dzakakamurwa mumhuri medu. Vamwe vanofarira mapichisi eyero, vachinongedzera yavo "yakasarudzika peachy kuravira," nepo vamwe vachirumbidza kutapira kwemachena machena. Une zvaunofarira here?
Kubva kunze, yero uye chena mapichisi anosiyaniswa neruvara rweganda - yakadzika yero ine tsvuku kana pinki blush kune yaimboenzaniswa maringe nependi nepingi kune yekupedzisira. Mukati, iyo goridhe nyama yeyero peach yakanyanya kuva acidic, iine tartness iyo mellows apo peach inoibva uye inopfava. Machena machena machena akadzika muasidhi uye anotapira zvinotapira ingave yakasimba kana yakapfava.
Mapeche machena zvakare akapfava uye akapwanyika zviri nyore, izvo zvakaita kuti zvisatengeswe muzvitoro zvakawanda kusvika kuma1980, apo mhando dzakaomarara dzakagadzirwa. Sekureva kwaRuss Parsons mune Maitiro Ekutora Peach, mhando dzekare dzechena mapichisi (uye nectarines) dzaive neka tang kuyera shuga, asi iwo anotengeswa nhasi anotapira zvakafanana. Iwe uchiri kugona kuwana mamwe eakare marudzi kumisika yevarimi.
Kana zviri zvekubika, mhando mbiri idzi dzinochinjika maererano nezvinodiwa. Isu tinowanzo funga kutapira, kutapira kwemaruva kwe machena mapichisi kwakanakisa pakudya kunze kweruoko kana kunyaira, asi seyakanyanya kunaka kunhuhwirira kwemapeche eyero ekubheka.
Mapichisi ndiwo manyuko enhando e antioxidants uye vhitamini C iyo inodiwa pakuvaka mativi anobatanidza mukati memuviri wemunhu. Kudya kwezvikafu zvakapfuma muvhitamini C kunobatsira munhu kukudziridza kuzvidzivirira kuzvirwere uye kunobatsira kubvisa zvinokuvadza zvemahara zvinokonzeresa mamwe cancer.
Potasium chinhu chakakosha chemasero nemuviri wemvura zvinobatsira kudzora kurova kwemoyo uye kuwedzerwa kweropa. Fluoride chinhu chemapfupa nemeno uye chakakosha mukudzivirira mazino emeno. Iron inodiwa pakuumbwa kwesero reropa.